Tetik’asa BVPI /PHRD Boeny: nahazoam-bokatra ireo sehatr’asa fanombohana | Région Boeny
Tetik’asa BVPI /PHRD Boeny: nahazoam-bokatra ireo sehatr’asa fanombohana
22 mars 2016 A La Une, Actualité
Nidina ifotony tao amin’ny kaomina Ankazomborona, Distrikan’I Marovoay, ny Alakamisy 17 martsa ny Talen’ny fampandrosoana ny faritra sy ny avy ao amin’ny Foibem-paritry ny fampiroboroboana ny fambolena eto Boeny, nijery ny fampiharana ny tetik’asa BVPI /PHRD (Bassins Versants Périmetres Irrigués / Policy and Human Resources Development) sy namantatra ireo vokatra azo tamin’ny taona 2014-2015.
Tsiahivina fa ny tetik’asa BVPI-PHRD dia natao mba ho fampitombona maharitra ny vokatry ny fambolena avy amin’ireo Lemaka Voatondraka sy ny Sahandiraka mifandraika aminy. Ny firenena japoney, amin’ny alàlan’ny JICA no mpamatsy vola ary ny Banky iraisam-pirenena no mpitantana izany.
Maharitra efa-taona (2014-2017) ny tetik’asa BVPI-PHRD ary kaomina efatra ao Marovoay no toerana hiasany dia ny lemak’i Marovoay, Marosakoa, Ambolomoty ary Ankazomborona.
Sehatr’asa efatra ihany koa no hampiarin’ny tetik’asa amin’ireo toerana ireo dia ny fampiroboroboana ny fambolena mampidi-bola toy ny lojy sy ny voanjo. Nahatratra efatra taonina ny vokatra tamin’ny velaran-tany enina hekitara nanaovana fampiharana tamin’ny taona 2014-2015. Ary notohizana indray ny voly lojy tamin’ity taona ity amina velaran-tany 12ha.
Faharoa dia ny sehatra fampiroboroboana ny Lemaka voatondraka na Périmètres irrgués izay misahana indrindra ny adirano sy ny fitarihan-drano ho amin’ireo velaran-tanimbary midadasika amin’ireo kaomina efatra nosafidin’ny tetik’asa ireo.
Fahatelo dia ny fampiroboroboana ireo Sahandriaka na Bassins versants amin’ny alàlan’ny fambolen-kazo toy ny akasia tamina velaran-tany 89 hekitara, sy ny fangadina lavaka 21 voaharo izay tototry ny fasika tamin’ny taona 2014-2015.
Ny sehatr’asa faha-efatra dia ny fanohanana ny fikarohana mikasika ny vary. Io dia fiaraha-miasan’ny tetik’asa amin’ny FOFIFA izay efa manana traik’efa amin’ny fikarohana ara-pambolena.
Anisan’ny vokatra andrasana aorian’ny 2017 izy hataperan’ny tetik’asa dia ny fampitomboana ny tahan’ny vokatra mihoatra ny 16% isan-taona isaky ny hekitara amin’ireo toerana hiasan’ny BVPI-PHRD ireo ary fampitomboana ny isan’ireo mpamboly mampiasa ny tekinika nohatsaraina ho maherin’ny 7200 ka mba ho vehivavy ny 27% amin’izany.
Ankoatra ireo dia andrasana amin’izao fomba fiasan’ny BVPI-PHRD izao ihany koa afaka efa-taona ny mba hitombo hatrany amin’ny 2090ha ireo velaran-tany voakarakara sy azon-drano ara-dàlana, ary ho maherin’ny 490ha ireo Sahadriaka voatantana maharitra, ka tsy ho tototry ny fasika sy ny atsanga intsony.